Maxaa looga baahnaa reer Laascaanood, kadib tallaabadii Somaliland? | Dalkaan.com
Home Warkii Maxaa looga baahnaa reer Laascaanood, kadib tallaabadii Somaliland?
Muqdisho (dalkaan) – Xildhibaan Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadan oo mar soo noqotay ra’iisul wasaare ku xigeen ayaa si adag uga hadashay dhacdadii Laascaanood, kadib markii ay Somaliland magaaladaasi kasoo masaafurisay dad ka soo jeeda koonfurta.
Previous articleMaxaa kasoo baxay kulanka dhex-maray Farmaajo iyo Abiy?
Next articleFarmaajo oo saddex qodob kala hadlay Abiy Axmed